Global Aawaj | के हो पेगासस ? कसरी गरिन्छ फोन ह्याक ? के हो पेगासस ? कसरी गरिन्छ फोन ह्याक ?
के हो पेगासस ? कसरी गरिन्छ फोन ह्याक ?
काठमाडौँ । अमेरिकाको वासिङ्टन पोष्ट, भारतको समाचार वेबसाइट ‘द वायर’ लगायत सञ्चारमाध्यमले एउटा खबर प्रकाशित गर्दै दाबी गरेको छ – विश्वभरका कयौँ पत्रकार, नेता, कुटनीतिज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ताको फोन ह्याक गरिएको छ ।
यद्यपि, ‘पेगासस’ नाम गरेको जुन ‘स्पाइवेयर’ को प्रयोग गरेर फोन ह्याक गरेको समाचार बाहिर आएको छ, त्यसलाई तयार गर्ने कम्पनी एनएसओले भने सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । यस प्रोग्रामलाई केवल ‘जाँच र परीक्षण गरिएपछि’ सरकारहरूलाई मात्र बिक्री गरिने कम्पनीको दाबी छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतका पत्रकार र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको फोनलाई इजरायलमा निर्मित यस सफ्टवेयरको माध्यमबाट ह्याक गरियो र उनीहरूको निगरानी गरियो । अब प्रश्न उठ्छ आखिर यो ‘पेगासस’ के हो र यसले कसरी काम गर्छ ?
उता, होलोन इन्स्टीट्यूट अफ टेक्नोलोजीमा साइबर विभागका प्रमुख डा. हारेल मेनाश्रीका अनुसार यो निकै महँगो हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘यसको सटिक मूल्य हामीलाई थाहा छैन । तर यो अति उन्नत सिस्टम निकै महँगो हुन्छ । यसको मूल्य कयौँ लाख डलरमा हुन्छ ।’
डा. हारेलका अनुसार एनएसओ यो सफ्टवेयर एन्ड युजर एग्रीमेन्ट र लाइसेन्सअनुसार मात्र सरकार र सरकारी एजेन्सीलाई उपलब्ध गराउँछ । उनी भन्छन्, ‘जुन देश यस्तो उन्नत सर्भेलेन्स टेक्नोलोजी विकास गर्दैनन्, उनीहरू यसलाई खरिद गर्छन् । यो एउटा युद्ध विमान खरिद गरेजस्तै हो । यसको प्रयोगका कयौँ सर्त हुन्छन् । तर, एक पटक बिक्री गरेपछि बिक्रेताले यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भनेर नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।’
के एनएसओले डाटा एक्सेस गर्छ ? ह्याकिङ कसले गर्छ ?
डा. गाबी सि बोनी भन्छन्, ‘यो निकै जटिल प्रविधि हो । यसलाई प्रशिक्षणपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । सायद एनएसओले यसलाई खरिद गर्ने सरकारको एजेन्टलाई प्रशिक्षण दिन्छ ।’ उता, प्राध्यापक हारेल भन्छन्, ‘यो एउटा टूल मात्र होइन, पुरै सिस्टम हो । यसलाई प्रशिक्षणपछि मात्र चलाउन सकिन्छ ।’
एनएसओका अनुसार यो मास सर्भेलेन्स टूल होइन । यो निश्चित व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्न बनाइएको हो । यसको मद्दतले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिनुमाथि नजर राख्न सकिन्छ । यसले लक्षित व्यक्तिको फोन ह्याक गरेर उसको निगरानी गर्दछ । ‘यसले लक्षित व्यक्तिको फोन नियन्त्रणमा लिएर त्यससँग जोडिएको तथ्याङ्क एजेन्सीलाई एक्सेस दिन्छ । यसको प्रयोग फोन कल सुन्न सकिन्छ, फोनको क्यामरा र माइक्रोफोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ हारेल भन्छन् ।
उता कर्नल गाबी सि बोनी भन्छन्, ‘यो भन्न कठिन छ कि यसले काम कसरी गर्छ । यो एनएसओको ‘व्यावसायिक गोप्यता’ हो । साइबर सुरक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका शोधकर्ताहरूलाई पनि यसबारे अधिक जानकारी छैन ।’ ‘तर यो यति उन्नत छ कि लक्षित व्यक्तिलाई आफ्नो फोन ह्याक भएको थाहा हुँदैन । उसले आफ्नो फोन पहिलेको जस्तै प्रयोग गरिरहन्छ,’ उनी भन्छन् ।
के केही सङ्केत देखिन्छ जसबाट फोन ह्याक भएको पत्ता लगाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा गाबी भन्छन्, ‘यदि लक्षित व्यक्तिले ह्याक भएको थाहा पाउने हो भने त ह्याक गरेको मतलब नै भएन नि ।’ बीबीसी हिन्दीबाट